Abaarta Ka Jirta Gobolka Bari Oo Saameysay Waxbarashadii Gobolkaasi – Goobjoog News
Guddoomiyaha Wabarashada degmada Qardho ee gobolka Bari, Saciid Maxamed Faahiye oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in abaarta saameynta ballaaran ku yeelatay dadka iyo duunyada ay sidoo kale saameysay habsami u socoka waxbarashada.
Waxa uu xusay guddoomiyaha in waalidiinta qaar ay ku tiirsanaayeen wax soo saarka xoolaha ay xilligaan dhibaato badan ka haysato bixinta lacagaha iskuulada, maadaama xoolihii ay ku tiirsanaayeen qaarna ay ka baaba’een halka qaarka kalena aan la iibgeyn karin.
Sidoo kale waxa uu sheegay Guddoomiye Faahiye in ardayda qaar ay iskuullada kaga maqan yihiin xanuunada faafa oo ku dhacay kadib xaalado caafimaad darro oo abaarta ka dhalatay.
“Abaarta dalka ka jirta saameyn badan bay ku yeelatay waxbarashadii dalka, haddii ay ahaan lahayd dhanka caafimaadka ardayga ama dhanka qarashka waxbarashada, waalidiinta qaar waa ay awoodi waayeen iney ilmahooda kabixiyaan lacagta Iskuulka, halka ardeyda qaarna ay xarumaha waxbarashada u imaan waayeen caafimaad darro iyo curada faafa oo ku dhacay” ayuu yiri Saciid Maxamed Faahiye.
Abaarta ka jirta gobolka Bari ayaa saameysay dadka iyo duunyada, inkastoo hadda deegaanno aan badneyn oo gobolkaasi ah uu ka da’ay roob.
Gabadh Soomaaliyeed oo Sheegtey in ay Cudurka Aids-ka Ka Qaaday Kufsi Loo Geystey Iyada oo Tahriibeysa (Dhageyso)
Zenegra Online [url=http://viacialisns.com/#]п»їcialis[/url] Levitra Orodispersible Rezeptfrei Cialis Propecia Bayer
Qrbxdg zidivf over the counter cialis how much does cialis cost at walmart
Cclmvv oreuyo buy viagra cheap online how much does cialis cost at walmart
cialis free trial canada buy cialis online overnight shippin...
buy viagra with paypal uk viagra online adelaide where can i...
cialis with no prescription cialis pills online the cialis p...
viagra without prescirption viagra super active reviews buyv...